Milateriga & warfaafinta DF Soomaaliya oo iska kaashanaya dagaalka Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milateriga & warfaafinta DF Soomaaliya oo iska kaashanaya dagaalka Alshabaab
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay xoojinayaan wada-shaqeyntooda, si shacabka loola socodsiiyo howlgallada ay wadaan ciidamada Soomaaliya ee ka dhanka ah Alshabaab.
Wasiirka warfaafinta, Mustaf Dhuxulow ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jen. Daahir Cilmi Aadan (Indho-qarsho) oo ay wehliyeen saraakiil ciidan oo kale.
Kulanka ayaa looga wada hadlay sidii warbaahinta qaranka ay door weyn uga ciyaari lahayd tebinta howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada xafiiska wasiirka warfaafinta, isagoo sheegay inay asaga iyo wasiirka ka wada hadleen sidii shacabka loo wacyigelin lahaa, loona gaarsiin lahaa guulaha ciidanka.
“Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqano xafiiska Wasiirka oo aan ka wada hadalno sidii shacabka loo wacyigelin lahaa loona gaarsiin lahaa guulaha ciidanka XDS. Warfaafinta waa lafdhabarka wacyigelinta bulshada.” Ayuu yiri Jen. Indha-qarshe.
Wasiirka warfaafinta, Mustaf Dhuxulow ayaa sheegay in ciidanka ay yihiin laf-dhabarta jiritaanka shacabka iyo dalka, wuxuuna ballan-qaaday inay warbaahinta qaranka xoojin doonto wada-shaqeynta ay la leedahay taliska ciidanka xoogga dalka.
“Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in Taliyaha Ciidanka XDS iyo Saraakiisha XDS inaan xafiiskeyga ku qaabilo oo aan ka wada hadalno sidii howlgalka ciidanka XDS u noqon lahaa mid guuleysta oo shacabkana lala socodsiiyo horumarka guulaha ciidanka. Ciidankaa XDS waa lafdhabarka jiritaanka shacabka iyo Dalka” ayuu yiri wasiir Dhuxulow.
Wasiirka ayaa hadalkiisa sii raaciyey “Ciidanka XDS waxey ku shaqeeyaan daruufo aad u adag oo runtii ay ku ammaananyihiin dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagaxisada ah oo shacabka u diidan nabad iyo horumar. Ciidanku waa geesiyaal nooga baahan inaan dhiiri gelino oo aan ku taageerno howlgalkooda si dalka u noqdo mid nabad ah oo shacabka siiya fursad ay aayahooda uga tashadaan”.
“Waxaan maanta ka wada hadalnay muhiimada wacyigelinta bulshada iyo Warbaahinta Soomaaliyeed si shacabka u helo wararka saxda ah iyo horumarka iyo guulaha ciidanka Soomaaliyeed ay si joogta ah u sameynayaan.” Sidaa waxaa yiri wasiir Dhuxulow.
Wasiirka ayaa shirka ku soo gabogabeeyey oo yiri “Waddan walba waxuu ku dhisan yahay ciidankiisa oo ka difaaca shacabka dhammaan wax allaale iyo waxii wax u dhimaya sharafka ummaddaas. Shacab walba waxaa muhiim ah inuu ciidankiisa la joogo oo uu ku taageero howlgalada iyo waajibaadkooda qaran. Waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa ciidanka geesiyaasha ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo leh taariikh weyn oo ay weligoodba garab taagan yihiin ciidankooda. Shakina iigama jiro in dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisada lagu guuleysan doono.”
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa horay si weyn uga qeyb qaadan jirtay dagaalka ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM kula jiraan xarakada Alshabaab, waxaana hadda milateriga iyo warfaaafintu sheegayaan iney shaqdaas sii xoojinayaan.
Somali Athletics Federation complains about interference by NOCSOM official